ပီတိ: အားလပ်ရက် ၀၉ (၁)
ခရီးထွက်မယ်ပြင်နေပေမယ့် ဒီခရီးသွားရတာ အရင်လို တက်ကြွရွှင်လန်းမှုကို မခံစားရဘူးဖြစ်နေသည်။
အရင်တုန်းကဆို ခရီးတစ်ခုထွက်မယ်ဆို ကြိုပြီးရင်ခုန်နေမိသည်။ သွားမယ့်နေ့မှာဆို ဘယ်လို ပျော်နေမှန်းမသိကို ပျော်နေမိတတ်သည်။ အခုတော့ အရင်ကလို မခံစားမိ…
ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်နေမိသည်။ တခုခုကြောင့် စိတ်လေးနေတာလား…
မဟုတ်လောက်ပါဘူး… မသွားခင် အလုပ်ပြီးအောင်လုပ်နေရတော့ စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းဖြစ်နေတာ ဖြစ်မှာပါ။
လေယာဉ်ချိန်က ည ၈နာရီ မိနစ် ၄၀ မှ ဆိုတော့ ရုံးမသွားတော့ပဲ တနေကုန်အိမ်မှာနေ အီးမေးလ်ဖတ်၊ ပစ္စည်းထည့်၊ လိုအပ်လောက်မယ့် ပစ္စည်းလေးတွေ ထွက်ဝယ်နဲ့ပဲနေလိုက်တော့သည်။
ညနေ ၆နာရီလောက်မှ ရထားနဲ့ လေဆိပ်ကိုသွားဖို့ အိမ်ကထွက်လာခဲ့သည်။ အိမ်အောက်ရောက်မှ ရထားနဲ့မသွားတော့ပဲ taxi နဲ့ပဲသွားဖို့ စိတ်ပြောင်းသွားသည်။ ထွက်သာလာတယ် အခုချိန်အထိလည်း ဘာမှ မခံစားမိသေး။ စိတ်တော့ နည်းနည်းပူမိသလိုပဲ…
ခရီးသွားဖို့ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေစစ်ကြည့်တော့လည်း အကုန်စုံအောင်ပါသည်။
ကားပေါ်မှာ စိတ်ကိုလျော့ စိတ်ဒုန်းဒုန်ချလိုက်တော့မှ စိတ်ထဲမှာ တင်းကြပ်နေတာတွေ သက်သာသွားတော့သည်။
လေဆိပ်ကိုရောက်ပြီး လေယာဉ်ထွက်ခွါချိန်ကိုကြည့်လိုက်တော့ Retimed 21:40 လို့တွေ့လိုက်ရပါသည်။ ပုံမှန်အချိန်ထက် တစ်နာရီနောက်ကျပြီးထွက်မယ်ဆိုတော့ ဘန်ကောက်မှာ လေယာဉ်ပြောင်းဖို့ အချိန်တော်တော်လေးနည်းသွားသည်။ ပြောင်းဖို့ အချိန်တော့ မှီတော့မှီလောက်ပါတယ် လို့ တွေးရင်း Check-in လုပ်ဖို့ကောင်တာကို သွားဖို့လုပ်ရင်း ဘန်ကောက်လေဆိပ်မှာ တွေ့ဖို့ချိန်းထားတဲ့ မိဘတွေ စိတ်ပူနေမှာကိုလည်း တွေးလိုက်မိသည်။ ချက်ချင်း ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ အကိုဆီလှမ်းဆက်တော့ “လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော…. ”
အာ… အရေးဆိုချက်ချင်းဆက်သွယ်ဖို့ အဆင်ပြေအောင် လက်ကိုင်ဖုန်းတွေ တီထွင်ထားတာ ငါတို့ တိုင်းပြည်မှာကျတော့ တစ်မျိုးဖြစ်နေပါသည်။ အကျိုးအကြောင်းကိုတော့ တမျိုးမဟုတ်တမျိုးသိရဖို့ လာကြိုဖို့စောင့်နေတဲ့ အမဆီကိုပဲ လှမ်းဆက်တော့သည်။
“ဟဲလို မမလား… ငါ့လေယာဉ်ထွက်မယ့်အချိန်နောက်ကျမယ်တဲ့… အဲဒါရန်ကုန်ကို လှမ်းဆက်ကြည့်ပါဦး။ မေမေတို့မထွက်သေးရင် အကျိုးအကြောင်းသိရတာပေါ့။”
“ဟုတ်လား…ဘန်ကောက်မှာ လေယာဉ်ပြောင်းဖို့ရော မှီပါ့မလား…”
“အေး..မှီတော့မှာပါ ဒါပေမယ့် အချိန်တော့ နည်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်…”
“ဟုတ်ပြီ… အဲဒါဆို ငါ ရန်ကုန်ကိုလှမ်းဆက်ထားလိုက်မယ်လေ…”
“အေး… ပြီးမှ ငါထပ်ဆက်လိုက်တော့မယ်”
စကားပြောပြီး check-in လုပ်ဖို့ စာရွက်စာတမ်းတွေပေးလိုက်တော့ ၀န်ထမ်းအမျိုးသမီးက လေယာဉ်ထွက်ချိန် နောက်ကျမယ်လို့ ပြောလိုက်သည်။ သိတယ်ဆိုတာ ပြန်ပြောရင်း …
“ကျွန်တော့်မိဘတွေက ဒီလေကြာင်းလိုင်းနဲ့ပဲ ရန်ကုန်ကနေ ဘန်ကောက်ကိုသွားမှာ… ကျွန်တော်နဲ့ ဘန်ကောက်မှတွေ့ပြီးတော့ လေယာဉ်တစီးထဲ စီးပြီး ခရီးဆက်မှာဆိုတော့ သူတို့နဲ့ နေရာ အတူတူရဖို့ လုပ်ပေးလို့ရမလား…”
“ရတာပေါ့… ကျွန်မ စီစဉ်ပေးလိုက်မယ်လေ…”
လို့ ကောင်တာမှရှိတဲ့ အမျိုးသမီးက ပြုံးပြီးပြန်ဖြေလိုက်သည်။
ဒီလိုစီစဉ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ နောက်ခရီးစဉ်အတွက် အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။ စိတ်ထဲမှာ ပူနေတာ ဒီလေယာဉ်နောက်ကျတဲ့ ကိစ္စဖြစ်မှာပါလို့ တွေးလိုက်မိရင်း ကောင်တာရှေ့မှာ ရပ်စောင့်နေလိုက်သည်။
ခဏကြာတော့လည်း အဲဒီအမျိုးသမီး လုပ်နေတာမပြီးသေး။ သာမာန် check-in လုပ်တာ ဒီလောက်တော့ မကြာရပါဘူး။ ဘာများဖြစ်နေလို့ပါလိမ့်ဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ အနည်းငယ်တော့ ပူပန်လာမိပြန်သည်။ မနေနိုင်တော့ ကောင်တာအနားကပ်ပြီး မေးကြည့်လိုက်သည်။
“ခဏလေးနော်…” ခေါင်းငုံ့လုပ်နေရင်း ပြန်ဖြေသည်။
“လေယာဉ်ချိန် ပိုပြီးနောက်ကျတော့မယ်… ဒီကို ည ၁၁ နာရီကျမှ ရောက်မယ်တဲ့…”
“အိုး… ဒါဆို ဘန်ကောက်လေယာဉ်ပြောင်းဖို့ ဘယ်အဆင်ပြေတော့မလဲ… ”
“ဟုတ်တယ်… လေကြောင်းလိုင်းက တစ်ခုခုစီစဉ်ပေးမှာပါ… ခဏလေးစောင့်ပါဦး။ ငါသွားမေးလိုက်ပါဦးမယ်။” ဆိုပြီး လေကြောင်းလိုင်းက တာဝန်ရှိ လူတစ်ယောက်ဆီထွက်သွားသည်။ သူ့နောက်လိုက်သွားရင်း လေကြောင်းရဲ့ ကောင်တာနားမှာ ရပ်စောင့်နေလိုက်တုန်း နောက်ထပ် ခရီးသည် ၁၄-၅ ယောက်လည်းထပ်ရောက်လာသည်။
၁၀ မိနစ်လောက်ကြာတော့ လေကြောင်းလိုင်းမှ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးမှ ဘန်ကောက်မှ တဆင့်တခြားကို ဆက်သွားမယ် ခရီးသည်တွေကို တခြားလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်တဲ့ Bangkok Airways ကိုပြောင်းပေးမယ်ပြောပါသည်။
Bangkok Airways ကောင်တာကိုရောက်တော့ သွားရမယ် ခရီးစဉ်က စင်ကာပူ ဘန်ကောက် တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပဲ လမ်းမှာ ကိုဆာမူအိ (Ko Samui) ကျွန်းကို ခဏရပ်ဦးမှာကို သိလိုက်ရပါသည်။ ဘန်ကောက်ကို ရောက်မယ်အချိန်ကို မေးလိုက်တော့ ည ၁၁ နာရီမှာရောက်မှာဆိုတော့ လေယာဉ်ပြောင်းချိန်က မိနစ် ၂၀ လောက်ပဲရတော့မှာပဲ။
ဘန်ကောက်လေဆိပ်က အကျယ်ကြီးဖြစ်ပြီး တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ သွားရတာဝေးတော့ အပြေးအလွှားသွားရမယ်ဆိုတာ တွေးပြီး စိတ်ပူနေမိသည်။ ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ လမ်းခရီးမှာ အဆင်ပြေပါစေရန်သာ ဆုတောင်းနေတော့သည်။
Bangkok Airways မှာ check-in ၀င်ပြီးတော့မှ အမဆီကို ဖုန်းလှမ်းဆက်သည်။
“မမရေ… လေယာဉ်က ထပ်နောက်ကျသွားလို့ ငါ့ကို Bangkok Airways နဲ့ သွားဖို့ပြောင်းပေးလိုက်ပြီ… အခု ငါလေယာဉ်ဆီကိုသွားနေပြီ။ ဘန်ကောက်ကိုတော့ ၁၁ နာရီလာက်မှရောက်မယ်။ အဲဒါလှမ်းပြောထားတာ…”
“အေးအေး.. လေယာဉ်ပြောင်းဖို့ အဆင်ပြေတယ် မဟုတ်လား…”
“အေး ပြေပါတယ်.. ဒါပဲနော်…”
“ဟုတ်ပြီ… ငါလည်း ရန်ကုန်ကို လှမ်းဆက်ပြောလိုက်ပါဦးမယ်…”
လေယာဉ်ပေါ်တက်ဖို့ ပစ္စည်းတွေစစ်ဆေးပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ လေယာဉ်ပေါ်တက်လိုက်ရသည်။
တနာရီခွဲလောက် ပျံသန်းပြီးတော့ လေယာဉ်မယ်လေးတွေကို White Card (ဆိုက်ရောက်ကဒ်) တွေကိုလိုက်ဝေပါသည်။ ဘန်ကောက်ကို တိုက်ရိုက်သွားမယ်ဆိုပေမယ့် သေချာအောင်တော့ မေးလိုက်မိသည်။
“ဘန်ကောက်ကို ဆက်သွားမှာ အဲဒီ immigration ကိုဖြတ်ဖို့လိုလား…”
“အဲဒါဆိုရင်တော့ ဖြတ်ဖို့မလိုပါဘူး… ” လို့ လေယာဉ်မယ်လေးက ပြန်ဖြေသည်။
အဲဒါနဲ့ white card ကို မယူပဲထားလိုက်တော့သည်။
အဲလိုမေးပြီးနောက်က ခရီးသည်က ကျွန်တော်ကိုလှမ်းမေးသည်။
“ငါတို့လည်း ဘန်ကောက်ကို ဆက်သွားမှာ အဲဒါ ဒီကဒ်ဖြည့်ဖို့လိုလား…”
“Immigration ကိုဖြတ်ဖို့ မလိုဘူးလို့ပြောတာပဲ.. အဲတော့ ငါတော့ ဖြည့်ဖို့လိုမယ် မထင်ပါဘူး…”
လေယာဉ်က ကိုဆာမူအိကိုဆိုက်တော့ ဘန်ကောက်ကိုသွားမယ့် ခရီးသည်တွေ အောက်ဆင်းရမှာလား မေးလိုက်တော့ အားလုံးဆင်းရမယ် အဖြေပြန်ရတော့ လိုရမယ်ရ အထုပ်အပိုးတွေအကုန်လုံးကိုယူလာသည်။ တချို့ခရီသည်တွေကတော့ ပြန်တက်လာရမှာဆိုပြီး ပစ္စည်းတွေချန်ထားခဲ့သည်။
အောက်ကိုရောက်တော့ လေယာဉ်ပေါ်ကလူတွေအားလုံး Immigration ဖြတ်ရမည်လို့ ပြောလာပြန်ပါသည်။ အဲဒီမှာ ထိုင်းလေကြာင်းလိုင်းကနေ ပြောင်းလာတဲ့ ဘန်ကောက်ကိုဆက်သွားမယ့် ခရီးသည်က Bangkok Airways က၀န်ထမ်းတွေနဲ့ အခြေအတင်စကားပြောကြပါတော့သည်။ အမှန်က အားလုံးသေချာအောင် လေယာဉ်ပေါ်မှာမေးလာပြီးသား အခုမှ တမျိုးဖြစ်နေရပြန်သည်။
“မင်းသိလား… ငါတို့က ဘန်ကောက်ကို သွားမှာ… ဒီမှာ လေယာဉ်ရပ်လို့မို့လို့ ငါတို့က ဆင်းရတာ… ဘာဖြစ်လို့ ငါတို့က Immigration ကိုဖြတ်ရမှာလဲ…”
“ဒါကတော့ လေယာဉ်ပေါ်ကလူတွေအားလုံး ဖြတ်ရမို့လို့ပါ…” ဆိုပြီး မတိမကျပြန်ဖြေလာသည်။
ဘေးက ရပ်ထားထောင်နေသည့် ဥရောပသားတစ်ယောက်က ၀င်ပြောသည်။
“ငါပြောပြမယ်…. ငါတို့က ဘန်ကောက်ကိုသွားမယ်.. ဘန်ကောက်ကနေပြီး နောက်တစ်နေရာ ဆက်သွားမှာ… အဲတော့ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတဲ့ အထဲကို ငါတို့က ၀င်စရာမလိုဘူး… လေယာဉ်ကိုပဲ ပြောင်းစီးရမှာ… အဲတော့ Immigration ကို ဖြတ်စရာကိုမလိုတာ… နားလည်လား…”
“နားလည်ပါတယ်… ဒီမှာကတော့ လေယာဉ်ပေါ်ကလူတွေအားလုံး Immigration ဖြတ်ရမှာပါ…”
“ဘာကြောင့်လဲ…” ဆိုပြီး ဥရောပသားက ဆက်မေးသည်။
“ဘာကြောင့်လဲတော့ ငါလည်းမသိဘူး… ဖြတ်ရမှာပဲ… ” လို့ လေယာဉ် အမှုထမ်းက ဖြေသည်။
“ငါပြောမယ်… ငါတို့က တကယ်ဆို လေယာဉ်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီးစောင့်နေရုံပဲ… ငါ့အိတ်တွေက လေယာဉ်ပေါ်မှာ ရှိနေတုန်း… နားလည်လား…”
“လေယာဉ်ပေါ်မှာဘယ်အိတ်မှ မရှိတော့ပါဘူး… ဒီမှ အိတ်တွေရော လူတွေရော အကုန်လုံး အောက်ကို ချပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အားလုံး ပြန်တက်ရမှာပါ ” လို့ လေယာဉ် အမှုထမ်းကပြန်ဖြေတော့…
“နင်တို့ လေကြောင်းလိုင်က တော်တော်လေး ကြောင်တာပဲနော်…” ဥရောပသားက ပြောလိုက်တော့သည်။
နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်လိုမှပြောလို့မရတော့ လူတွေအားလုံးလက်လျော့ပြီး Immigration ဖြတ်လိုက်ကြတော့သည်။
တန်းစီနေရာက ကျွန်တော်အလှည့်ရောက်တော့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ white card ကိုပေးကာ မတ်တပ်ရပ်ကာ စောင့်နေလိုက်သည်။ Immigration ၀န်ထမ်းက နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို လှန်ကြည့်ပြီးတော့ “ဖာ့မာ… ” ဆိုပြီး အသံထွက်လာသည်။
အဲဒီတော့မှာ… မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားလျှင် ထိုင်းနိုင်ငံလေဆိပ်တွေမှာ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ မရဘူးဆိုတာ သတိရလိုက်တော့ ရုတ်တရက်တော့ ခေါင်းနပန်းကြီးသွားမိသည်။ နောက်တော့ ကိုယ့်အမှားမှ မဟုတ်တာ သူတို့ကြည့် ဖြေရှင်းပေးရမှာပေါ့ ဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်လာပြီး
“ဘာပြဿနာများ ရှိလို့ပါလဲ … ” လို့မေးလိုက်သည်။
“မင်းဟာက မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ဆိုတော့ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာမရဘူး ဆိုတာ မသိဘူးလား…”
Immigration ၀န်ထမ်းက မျက်နှာခပ်တင်းတင်းနဲ့ ပြန်မေးသည်။
“ငါသိတယ်လေ… အခုဟာက ထိုင်းလေကြာင်းက လေယာဉ်နောက်ကျလို့ ဒီလေယာဉ်နဲ့ တင်ပေးလိုက်တာ။ ငါလည်း Immigration ကိုဖြတ်ရမယ်လို့ မသိဘူး။ အဲတော့ မင်းတော့ တစ်ခုခု လုပ်ပေးမှာ ရမှာပဲ…”
“ငါတို့ ဘာမှ လုပ်ပေးလို့မရဘူး… ” တဲ့…
အဲဒီ ၀န်ထမ်းရဲ့ မျက်နှာက ခုန ခပ်တည်တည်ရုပ်ထက်တောင် ပိုတင်းသယောင်ထင်မိသည်။ အဲလိုပြောပြီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို မသင်္ကာသလို လျှောက်လှန်ကြည့်ပြီး ထိုင်း ဗီဇာတစ်ခုကို တွေ့သွားသည်။
“ဒီမှာ ဗီဇာရှိတာပဲ … ဒါသုံးလို့ရတာပဲ…” ဆိုပြီး ပြောလာတော့ နည်းနည်းတော့ စိတ်အချဉ်ပေါက်လာသည်။
“မင်း… အဲဒီ ဗီဇာကို လုံးဝမထိပါနဲ့ ငါအခုသွားတဲ့ ခရီးက အပြန်မှာ ထိုင်းကို ၀င်လည်မှာမို့လို့ ယူထားတဲ့ ဗီဇာ… ”
“အဲတော့ ငါတို့က ဘာလုပ်ရမှာလဲ…” တဲ့… ။
ဘေးမှာ ရှိနေတဲ့ Bangkok Airways ၀န်ထမ်းကို လှမ်းပြောလိုက်သည်။
“မင်းလည်းတွေ့တဲ့ အတိုင်းပဲ… အခု ပြဿနာဖြစ်နေပြီ… အဲတော့ မင်းတို့ ငါ့ကို ဖြေရှင်းပေးပါ…”
“ငါတို့လူကြီးနဲ့ ပြောလိုက်ပါဦးမယ်… ” ဆိုပြီး ဖုန်းတွေဆက်၊ စကားပြောစက်တွေနဲ့ ပြော နဲ့ ၅ မိနစ်လောက်စောင့်နေလည်း ဘာမှ မထူးသေး။
ဘေးက ကောင်တာမှာလည်း တရုတ်တစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကိုလည်း စောင့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရသည်။ သူလှည့်အကြည့်နဲ့ဆုံတာနဲ့ ပြုံးပြရင်း သူလည်း ကိုယ့်လိုပဲ ထင်ကာ မေးလိုက်သည်။
“ဘာဖြစ်နေတာလဲ… ခင်ဗျားလည်း ကျွန်တော့်လို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ မရဘူးလား… ” ဆိုတော့
“ရတယ်… ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံပေးရမှာဆိုတော့ ငါမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ စောင့်ခိုင်းထားတာ…” “အေးလေ… ဘာလို့ပေးရမှာလဲ… သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တာ လုပ်ပေးရမှာပေါ့…” ဆိုပြီး သေဖော်ညှိလိုက်သေးသည်။ တစ်ယောက်ထည်း စောင့်နေရတာထက်စာရင် အဖော်လေးနဲ့ဆို တော်သေးတာပေါ့ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ပေါ့။
ဒီအထဲမှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ မရနိုင်တာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ထားရတာ စိတ်ရှုပ်စရာမကောင်းဘူးလား မေးရင်… အဲလို မေးခွန်းမျိုးကို ခေါင်းထဲကို ရောက်မလာပါဘူး။
လေယာဉ်ထွက်ခွါချိန်လည်း ကျွန်တော်တို့ ကိစ္စကြောင့် နောက်ကျနေပါပြီ။ ဘန်ကောက်မှာ လေယာဉ်ပြောင်းချိန်တော့ ရလောက်ကောင်းပါရဲ့…
အဲဒီအချိန်မှာ တခြား Immigration ၀န်ထမ်း က ဘာမသိညာမသိ နဲ့လာမေးပါသည်။
“မင်းက ဗီဇာမပါပဲ ဒီကို ဘာလာလုပ်တာလဲ…”
အဲဒီမေးခွန်းကို ဖြေစရာမလိုဘူးလို့ ယူဆပြီး သူတို့ စိုက်ကြည့်နေလိုက်ပါသည်။
အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော့်ကို လုပ်ပေးနေသည့် ၀န်ထမ်းက ထိုင်းလို ကွိစိကွစ ပြောခါရှင်းပြကာ Immigration ၀န်ထမ်းတွေအားလုံးထွက်သွားကြသည်။
ခဏနေတော့ “ကျွန်တော့်နောက်ကို လိုက်ခဲ့ပါ…” ဆိုပြီး လေကြောင်းဝန်ထမ်းက လာခေါ်သွားတော့သည်။ အဲသည်တော့လည်း ဘာ Immigration မှ မဖြတ်ရပါပဲနဲ့ လေယာဉ်ပေါ်ပြန်ရောက်ကာ ဘန်ကောက်ကို ခရီးဆက်ထွက်နိုင်ပါတော့သည်။
လေကြောင်းလိုင်ဘက်ကလည်း လေယာဉ်ကိုမသွားပဲရပ်ထားတဲ့ စရိတ်ထက် Immigration ၀န်ထမ်းတွေကို ကျူတ်ကြက်လိ လိုက်တာကမှ သက်သာမည်လို့တွက်လိုက်သည်လို့ ယူဆလိုက်သည်။
လေယာဉ်ပေါ်ရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ လေယာဉ်မယ်တစ်ယောက်ကလာပြီး ရှေ့က Business Class ကထိုင်ခုံတွေမှာ လာထိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်သည်။ သူတို့အမှားကြောင့် တောင်းပန်ဖို့တော့ မဟုတ်ပေ။ ဘန်ကောက်လေဆိပ်ရောက်လျှင် လေယာဉ်ပြောင်းရမယ့်လူတွေ အရင်ဆင်းနိုင်ဖို့ စီစဉ်နေခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။
ဘန်ကောက်လေဆိပ်ရောက်တော့ ၀န်ထမ်းတွေ ကားလေးတွေရပ်စောင့်နေကာ လေယာဉ်ပြောင်းစီးရမယ့် သူတွေကို ကားတွေပေါ်ခွဲတက်ခိုင်းပြီး လေယာဉ်ကွင်းထဲမှာ အရှိန်ပြင်းစွာ မောင်းနှင်တော့သည်။
၁၀ မိနစ်လောက်မောင်းပြီး အပေါက်တစ်ပေါက်မှာရပ်လိုက်သည်။ အရှေ့က ၀န်ထမ်းလည်း ဆင်းပြီးတော့ သူနောက်လိုက်ခဲ့ဖို့ အော်ပြောရင်း ရှေ့နေပြေးနေတော့သည်။ ကျွန်တော်တို့လည်း သူ့နောက်ကနေ အထုပ်တွေဆွဲကာ ပြေးလိုက်ရသည်။ လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ကောင်တာတစ်ခုကို လက်ညှိုးထိုးတာ “ဖရန့်ဖာ့ထ်ကိုသွားမယ့်သူ အဲဒီကောင်တာကိုသွားပါ… ” ဆိုကာ ဆက်ပြေးသည်။ ဖရန့်ဖာ့ထ်ကိုဆက်သွားမယ့် တရုတ်ကတော့ အဲဒီမှာနေခဲ့ပြီး ကျွန်တော်ကတော့ ဆက်လိုက်ပြေးရသည်။ ဒီအတိုင်းပြေးလိုက်၊ travelator ပေါ်မှာပြေးလိုက်နဲ့ တော်တော်လေးပြေးလိုက်ရသည်။ နောက်ဆုံးတော့ အဝေးမှာ ထိုင်စောင့်နေသည့် အမေ နဲ့ စိတ်ပူနေလို့ မတ်တပ်ရပ်ကာ စောင့်နေသည့် အဖေ တို့ကိုတွေ့လိုက်ရတော့မှ စိတ်ကပျော်နိုင်တော့သည်။
“ခင်ဗျားသွားရမှာ အဲဒီကောင်တာပဲ…” လို့ လိုက်ပုံ့သည့် ၀န်ထမ်းက ပြောလိုက်သည်။
ကောင်တာကို အပြေးသွားတုန်း အကျယ်ကြီး လှမ်းခေါ်လိုက်မိသည်။
“အဖေ့…..” ကျန်တဲ့လူတွေလှည့်ကြည့်ကုန်သည်။ အဖေကတော့ ကြားဟန်မတူ။
ကောင်တာရောက်တော့ ဘယ်သွားမှာတုန်းမေးတာကို ချက်ချင်းမဖြေနိုင်… ဟောဟဲဆိုက်တာကိုသက်သာစေရန် အနားယူပြီးမှာ…
“တိုကျို…. ” ဆိုကာ လေယာဉ်လက်မှတ်ကိုပြလိုက်တော့… နာမည်ကိုဖတ်ပြီး
“အိုး.. မင်းရဲ့ အဖေ နဲ့ အမေ စောင့်နေတာ ကြာနေပြီ….”
“ငါသိတယ်… မင်းတို့ လေကြောင်းလိုင်းက နောက်တာကျနဲ့ အကုန် ကသိကအောက်ဖြစ်ကုန်တာလေ…”
“ငါ့ကို ငါ့ မိဘတွေနဲ့ အတူတူထိုင်လို့ရအောင်လုပ်ပေးပါ…”
“အဲဒီနေရာမှာ လူရှိသွားပြီ… အနီးအနားမှာပဲ လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်…”
လေယာဉ်ထွက်ချိန် နီးနေပြီးဖြစ်လို့ ဘာမှ မပြောတော့ပဲ နေလိုက်သည်။ နောက်မှပဲ အဲဒီလူကိုပြောပြီး နေရာပြောင်းခိုင်းတော့မယ်လို့သာ စိတ်ကူးလိုက်တော့တဲ့ အတွက်…
Boarding pass ရပြီးတော့ ဘယ်ကိုသွားမလဲပေးတော့ အပေါ်ကိုတက်လို့သာ ပြောလိုက်သည်။ ဘန်ကောက်လေဆိပ်သည် အင်မတန်ကြီးပေမယ့် သေချာလှမ်းညွှန်ထားတာမရှိ၊ ပြင်ဆင်တာတွေညံ့တော့ လေဆိပ်ထက် ဈေးရုံအကြီးစားနဲ့သာ ပိုတူတော့သည်။
အပေါ်ရောက်တော့မှာ နောက်မှ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက် အပြေးလာပြီး အဖေနဲ့ အမေတို့ရဲ့ Boarding-Pass ကိုတွေကို လဲပေးကာ အတူထိုင်လို့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီး လို့ပြောသည်။
ပစ္စည်းတွေစစ်ဆေးပြီး ၅မိနစ်လောက်သာစောင့်လိုက်ရပြီး လေယာဉ်ပေါ်စတက်ရပါတော့သည်။ အားလုံး အချိန်ကွက်တိလေးတွေ ဖြစ်သွားတဲ့အပြင် ခုနက လေယာဉ်ကွင်းထဲမှာ ကားအမြန်စီးခဲ့ရတာတွေ၊ ပြေးခဲ့ရတာတွေက ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကားထဲ ရောက်သွားသလိုပင် ခံစားမိသေးသည်။
လေယာဉ်ပေါ်ရောက်ပြီး ဖုန်းထုတ်ကာ ဆက်လိုက်မယ်ကြံတုန်း အမဆီက ဖုန်းဝင်လာသည်။
“မမ… ငါတို့ တိုကျိုကိုသွားမယ့် လေယာဉ်ပေါ်ရောက်ပြီ။ အမေတို့နဲ့လည်း တွေ့တယ်… အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်နော်…”
“အေးအေး.. အဆင်ပြေရင် ပြီးတာပဲ… ငါလည်း ဒီမှာမအိပ်နိုင်ပဲ စောင့်နေတာ… ”
“ဟုတ်ပြီ… လေယာဉ်လည်းထွက်တော့မှာမို့ ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်… ကိုကိုဆီသာ နင်ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောထားလိုက်တော့… ”
ဖုန်းချပြီး နေရာမှာ ထိုင်ကာ အမေတို့နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဝေမျှနေလိုက်သည်။
ခရီးထွက်ခဲ့တဲ့ နေ့က ၀၉/၀၉/၀၉။
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ အားလပ်ရက်ယူပြီးသွားခဲ့တဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်းပါ။ အခုလို စစပြီး မပြီးသေးတဲ့ စာတွေအများကြီးပါ။ အကုန်လုံးကိုပြီးအောင်ရေးသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ အခုတလေ ဒီအကြောင်းပဲ စိတ်ထဲမှာရှိနေတုန်း ဒါလေးစရေးလိုက်ပါရစေ။ စာတွေကို အရင်လိုပြန်ဖတ်ဖြစ်နေပေမယ့် မှတ်ချက်တွေလိုက်မရေးဖြစ်သေးပါဘူး။ နားလည်ခွင့်လွှတ်ကြပါဦး။ :)
Posted by P.Ti at Monday, October 12, 2009
သြော် ဒါကြောင့်မို့ တိတ်နေတာကိုး။ လေယာဉ်ချိန်နီးတာ၊ immigration နဲ့ ကြုံရတာတွေက စိတ်မောစရာ။ ဆက်ရေးပါဦး။
ဟူးးးးးး......ဖတ်ပြီးတော့ မောသွားတာပဲ...ရေတစ်ခွက်လောက်..။ :P
ဟုတ်ပါ့..မသီတာရယ်..ကျမ ဆိုလည်း သူတို့ တောင်းတဲ့ အတိုင်း..ရှိတဲ့ ဗီဇာ ပေးထု ပြစ်လိုက်မိမယ် ထင်ပါ့..
ပုဂံသား ကွ..း)
နောက်ရက်တွေမှာတော့ မောစရာ မရှိတော့ဘူး ဟုတ်...
တော်သေးတာပေါ့။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ်ပါ လိုက်ပြေးနေရသလိုလိုပဲ။ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေက လူတွေကို ပိုစိတ်ပင်ပန်းစေတာ အမှန်ပဲ။
ဖူး ........ တော်ပါသေးရဲ့။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သဲထိပ်ရင်ဖို နဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အကြောင်းလေး ရခဲ့တာပေါ့လေ။ :-))))